What is cooking in Dhuusamareeb? - Page 2 - Politics - Somali Forum - Somalia Online
Khilaafkii u dhexeeyey dowlada dhexe iy maamul goboleedyada oo la xaliyey
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe oo ka hadlayey shirka magaalada Dhuusamareeb ayaa shaaciyey in xal waara laga gaaray khilaafkii maamulkiisa kala dhexeeyey dowladda dhexe ee Somalia.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhowaaqday go’aan lama filaan ah oo la xiriira ka qeyb-galayaasha shirka xiga ee la filayo in saddex toddobaad kadib uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb.
Shir afar geesood ah oo ka socda Dhuusamareeb iyo wararkii ugu dambeeyey
Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya inuu haatan shir gooni u socdo Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo) iyo Madaxweynayaasha maamullada HirShabelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, kaas oo ah mid saxaafaddu ay dibad joog ka tahay.
Shirkan saddex geesoodka ah ayaa waxaa diirada lagu saarayaa caqabadaha hortaagan furitaanka wejiga saddexaad ee shirka Dhuusamareeb,sida ay Caasimada Online u xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kaloon yahay oo ku sugan gudaha magaaladaasi.
Wararka qaara ayaa sheegaya in shirka sababta uu u furmi la’yahay ay tahay maqnaasha Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo aan weli tegin caasimada Galmudug.
Axmed Madoobe ayaa safar ugu maqan dalka dibaddiisa, gaar ahaan magaalada Niarobi oo uu qaliin caafimaad ku galay, halka Deni oo weli ku maqan dalka Jabuuti.
Labada Madaxweyne ayaa waxaa la filayaa inay soo gabagabeeyaan socdaalladooda, kuna biiraan shirka Dhuusamareeb 3, walow ay saluug ka muujinayaan shirkaasi.
Tan iyo xalay ayaa waxaa mashquul badan laga dareemayaa madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug oo ku wada hoydeen Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Madaxweynayaasha HirShabelle iyo Koonfur Galbeed oo shalay gaaray magaaladaasi.
Shirka Dhuusamareeb 3 oo ah mid xasaasi u ah ayaa waxaa diirada lagu saaraya xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan nooca doorashada ee dalka ka dhaceysa 2020/2021.
Villa Somalia oo war kasoo saartay kulankii ka dhacay Dhuusmareeb
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan hordhac u ah Shirka Wadatashiga Dhuusamareeb waxa uu la qaatay Madaxweyneyaasha Dowlad Goboleedyada, Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cumar Maxamuud Maxamed.
Axmed Madoobe iyo Deni oo ka war helay dabin siyaasadeed uu u dhigi rabay Qoorqoor
Sida ay illo wareedyo lagu kalsoonaan karo u xaqiijiyeen Caasimadda Online, mowqifkii Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ee ahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban oo ay ku mideysnaayeen dhammaan madaxda maamul Goboleedyada ayaa si lama filaan ah isku badalay kadib markii uu heshiis hoose la galay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Madaxweyne Qoor Qoor ayaa madaxweynaha Soomaaliya la galay heshiis ah in xilka Ra’isulwasaaraha loo magacaabo shakhsi uu isaga wato taas badalkeena uu Axmed Qoorqoor ballan qaaday inuu madaxda Maamul Goboleedyada ka dhaadhicin doono inuu dalka aado doorasho qof iyo cod ah si taas loo gaarana ay lagama maarmaan tahay in Dowladda hadda jirto la siiyo muddo 2 sano ah.
Heshiiska ay gaareen Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweyne Qoorqoor ayaa dhigaya in uu madaxweynaha Galmudug soo gudbiyo liiska shakhsiyaadka uu doonayo in loo magacaabo xilka Ra’isulwasaraha isla markaasna uu madaxweyne Farmaajo ka doorto qofka uu rabo, waxayna xogta sheegeysaa in Qoorqoor uu gudbiyey liiska illaa 5 musharax oo kasoo jeedo Beeshiisa ****.
Tan iyo markii uu Qoorqoor heshiiskaan la galay madaxweyne Farmaajo, wuxuu bilaabay dadaal ku aadan inuu ka miro dhaliyo waxyaabihii ku qornaa heshiiska, wuxuuna shirar kala duwan la yeeshay Guddiga Farsamada doorashada oo ay ka maqan yihiin kuwa matalayey Jubbaland iyo Puntland illaa uu Xalay Dhuusamareeb kaga dhawaaqay inuu furan yahay shirkii Maamul Goboleedyada iyo Dowladda Dhexe xilli ay qaadaceen Axmed Madoobe iyo Deni.
Madaxweynaha Galmudug oo kaashanayo Dowladda Dhexe ayaa ku guuleystay in madaxweynayaasha Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed lagu qanciyo inay taageeraan qorshaha muddo kororsiga ee Dowladda Soomaaliya taas badalkeedana iyagana loo ballan qaaday in la siiyo lacago iyo in Madaxweynaha Hirshabelle laga caawiyo sidii uu mar kale xilka ugu soo laaban lahaa.
Axmed Qoorqoor oo taleefoon kula hadlay Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa ku guuldareystay in Axmed Madoobe iyo Deni ay kasoo qeybgalaan shirka Dhuusamareeb3 taas badalkeedan ay soo saareen go’aano culus oo ay ku diideen shirkaas.
Illo wareedyo ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa Caasimadda Online u sheegay in Saciid Deni iyo Axmed Madoobe ay fahamsiin yihiin heshiiska ay gaareen Qoorqoor iyo Madaxweyne Farmaajo, shirka Dhuusamareebna uu yahay shirqool siyaasadeed oo la doonayo in loo dhigo, sidaas darteedna aysan marnaba ka qeyb geli doonin shirkaas illaa laga helo Xukuumad heshiiska la galo fuliso iyo in Beesha Caalamka ay marqaati ka noqoto waxyaabaha lagu heshiinayo.
Maamul Goboleedyada Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Galmudug, Gobolka Banaadir iyo Madaxweyne Farmaajo ayaa ku heshiiyey in shirka la furo isla markaasna laga soo saaro war murtiyeed iyo is faham ku aadan nooca ay noqon doonto doorashada dalka ka dhici doonto inkastoo uu jiro cadaadis ka imaanayo beesha Caalamka oo u aadan in shirka uu noqdo mid ay ku dhan yihiin dhammaan maamul Goboleedyada.
Akhriso; Noocyada Doorashada ee loogaga doodayo Shirka Dhuusamareeb 3 - Jowhar Somali Leader
Shirka ka socda magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa waxaa guddiga ka baaraandegga doorashada waxa ay...
International partners encourage participation by all leaders in crucial elections meeting